Xarakada Shabaab oo sheegtay inay Cafis u fidiyeen 150 ka mid ah Odayaasha dhaqanka oo is-diiwaan . | Goobsan Media Inc.
Home Somali News Xarakada Shabaab oo sheegtay inay Cafis u fidiyeen 150 ka mid ah...
Xarakada Shabaab oo sheegtay inay Cafis u fidiyeen 150 ka mid ah Odayaasha dhaqanka oo is-diiwaan .
Xarakada Al shabaab ayaa shaacisay inay degaanada ay maamulaan si Aad ah ugu soo qulqulayaan odayaasha dhaqanka ee soo xulay Baarlamaanka Soomaaliya iyo kuwa maamul Goboleedyda, iyagoo ka faa’iideysanaya cafiska loo fidiyey muddo 45 maalmood ah.
In ka badan 150 oday ayay sheegeen inay iska xaadiriyeen xarumaha Alshabaab ee degaanada kala duwan, waxayna ka faa’iideysanayaan cafiska Alshabaab u fidisay inay ku towbad keenaan, haddii kale tallaabo laga qaadi doono, kadib war kasoo baxay hoggaanka Alshabaab oo ku wajahnaa odayaasha.
Ma jirto cid xaqijisay war kasoo baxay Al Shabaab, laakiin Taliyaha Booliska Maamulka K/Galbeed ayaa xaqiijiyey inay magaalada Baydhaba ku xireen odayaal u tegay Alshabaab oo dib ugu laabtay magaaladaasi, iyadoo xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Somalia ay hore u shaaciyeen inay Alshabaab u yeerean Odayaashii soo xulay.
Dowladda Somalia ayaan wax tallaabo ah u qaadin arrintan, waxayna qeyb ka tahay ololeyaasha Alshabaab oo hore cadaadis ugu hayey ganacsatada, haddana u wareegay odayaasha dhaqanka oo hore ay u leyn jireen, iyagoo dilay boqolaal ergo.